iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #724 by leocha1
Ndingumtsha apha ngapha kwaye ndafumanisa le website ngezolo.
Ngexesha elide kakhulu ndiyinto engumntu oziqhenyayo we-simulator ye-flight simulator 2004, kwaye kuseninzi ukufumana.
Ndayifumana le sayithi emva kokuba ndihambe ngeenqwelo eziphambili ze-freeware.
Kwakumangalisa into endiyifumene apha.
Ngoko ke ndingathanda ukubonga kakhulu ngenxa yale mveliso ephezulu yemveliso ye-freeware.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #726 by Dariussssss
Enye into endibulela ngayo onke amagama anomusa. Indlela yam yokuza apha yayinokufana kakhulu neyakho. Ndikho kwi-FSX ngoku kodwa ixesha elide lihambayo, ndandiye kwi-FS2004, engalunganga nhlobo.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuba uhlale apha ngokusemandleni akho.
Kwakhona, mbulela kakhulu kwaye wamkela.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: leocha1
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #741 by Apollo21
Ndingathanda ukubonga ngazo zonke ii-freeware zokukhupha enizibonelela zona, ndiye ndisebenzisa indawo yakho ngeenyanga eziliqela kwaye ndifanele ndibulele ngaphambili kodwa kodwa njengokuba phakathi kwezinye izinto kukuba ngelixa i-ebay ngokuqhelekileyo ibheka iindiza njl. Kumntu othengisa (i-Freeware Aircraft) ngoko ndamthuma kwaye ndabuza ukuba ngaba ngokwenene i-freeware ngenxa yokuba ndineenqwelo ezifanayo ayenayo, kwaye wayezibuza ukuba ngaba ngokwenene i-freeware okanye i-payware yena waphendula wathi babeyimpahla yokuzikhethela wathi Umqulu we-freeware kwipakethi enye. Ngoku oku kubonakala kungalungile kum, ukuqhawula bonke abantu abaye bayilungisa kwaye bapapasha ezi ziza.
Mhlawumbi akukho nto yam yezoshishino kodwa mna ngokwalo ndicinga ukuba iphosakeleyo ngokupheleleyo, ndiqinisekile ukuba ayingekho mthethweni mhlawumbi andiyazi ukuba ndifuna ukubalumkisa abantu ngale nto yonke idizayiphu kwiidiski zifumaneka kwiRioo okanye ezinye Kwezinye iisayithi zokulanda.